Uchwepheshe we-Semalt Uchaza Amathuluzi Ezingxenyeni Eziphezulu Zewebhu
Kwabalandeli abathile bewebhu . Basiza umuntu ukuvuna idatha yewebhusayithi kusayithi futhi alondoloze endaweni eyikude noma kwi-hard drive yangempela. Abantu bazonda inketho ethandwayo yokulondoloza idatha yekhasi kusuka ekhasini lewebhu usebenzisa isiphequluli. Nokho, amanye amawebhusayithi anamakhasi amaningi. Umuntu angakwazi ukusebenzisa ithuluzi lesikhungo sewebhu ukusindisa amakhasi amaningi ekuhambeni. Iningi lala mathuluzi linikeza amasevisi wokuzenzakalela afana nokuhlela isimiso sangaphambi kokusetha. Lawa mathuluzi asebenza njengeziphequluli ezijwayelekile, ngaphandle kokuthi yibo abaqhamuka bewebhu abavakashela amakhasi ewebhu bese baqoqa idatha ebalulekile.
Kulesi sihloko se-SEO, ezinye zamathuluzi okukhishwa kwewebhu anethonya kakhulu zikhona:
Lena ithuluzi lokubonwa kwewebhu elibukwayo elingalanda ulwazi lewebhusayithi. Umsebenzisi unenzuzo ye-interface elula yokusebenzisa ehambisana nezici eziningi. Abantu abangenawo noma i-knowhow ye-program encane bangasebenzisa i-Octopus ukunika amandla isizinda sedatha kusuka ku-URL eqondisiwe.
I-scraper yewebhu ingafuna ukuthola idatha kusuka kuma-invoyisi, amaresidi nama-imeyili. Kuzo zonke lezi zimo, i-Hubdoc ingakwazi ukukhamba bese iqoqa lolu lwazi kusizinda esihlosiwe. Kusuka lapha, leli thuluzi liyakwazi ukugcina idatha ngendlela ehlelekile yokubhekisela kwekusasa.
Kubasebenzisi be-Windows, i-WinAutomation yenza kube lula ngabantu ukuthuthukisa okuqukethwe kumawebhusayithi abo. Kwenza abasebenzisi beWindows bathole ithuluzi elizenzekelayo elingakwazi ukulondoloza kanye nokwakha isiqondisi esakhiwe i-website yedatha kwi-drive yendawo.
I-Data Data Archiver
Uma ucubungula amathuluzi okubhuqwa kwebhulabhu esibhedlela, i-Health Data Archiver isiza abasebenzisi ukuthi bakhiphe idatha kumawebhusayithi wezinhlelo zezempilo. kusuka esibhedlela nasezinsizeni ze-ambulensi kanye nezinsizakalo zodokotela. Kubasebenzisi abudinga amasevisi we-ETL, i-Health Data Archiver isiza ukuqoqa ukuqoqwa kwedatha kuma-URL athile ezokwelapha asetshenziselwa izinhlelo zabo.
Leli thuluzi linikeza lula Isixazululo sokuqhafaza idatha ye-website. Abasebenzisi abanolwazi oluncane noma olunolwazi lwezinhlelo bangakwazi ukuthola idatha yewebhusayithi futhi bayilondoloze. I-Diggernaut inesibonakaliso esibonakalayo somsebenzisi kanye nokudonsa okulula nezici.
Kubasebenzisi abafuna ukukhiqiza ukuthengisa, ungathola idatha enembile usebenzisa amathuluzi afana ne-Salestools.io. Leli thuluzi linenketho yokuthola idatha yewebhusayithi yomqhudelwano. Ngaphezu kwalokho, umuntu angakwazi ukuxhumana nomklomelo wokumaketha webhusayithi lomncintiswano.
Kwezinye izidingo zokuqeda, ama-API angase angahambisani. Kulezi zimo, ukudlulisa idatha phakathi kwezinto zangempela-isikhathi noma izidingo zokusakaza kungenziwa kungenzeka ngokusebenzisa ithuluzi lokuhlanganiswa kwedatha.
Amabhizinisi angasebenzisa i-Datahut ukuze alungele ukusebenzisa okuqukethwe kwebhizinisi. Abanye abantu bangase bafune ukuqhuba ukuhlaziywa kwebhizinisi. I-Datahut iyithuluzi lesikhungo sewebhu esenza abasebenzisi balande idatha yewebhu kuwebhu. Abantu abaqala ukuhweba nge-e-commerce bangazuza kulolu hlelo lokusebenza.